अब भाइरस सँगसँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ- डब्लूएचओ – Health Post Nepal
अब भाइरस सँगसँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ- डब्लूएचओ
२०७७ असार ३० गते ९:४४
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का आपतकालीन निर्देशक डा. माइक रायनले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विकसित गर्न भइरहेका प्रयासमा निराशा व्यक्त गरेका छन्।
खोप विकसित गर्न विश्वभरका वैज्ञानिक खोजमा रहे पनि ठोस सफलता हासिल हुन नसकेका बेला डा. रायनले भनेका छन्, ‘भाइरस सँगसँगै कसरी जिउने भनेर सिक्न जरुरी छ। भाइरसको महामारी अन्त्य गर्न सकिन्छ वा केही महिनामा प्रभावी खोप बन्छ, यो साँचो होइन।’ खोपमा कहिले सफलता मिल्छ भनेर अझै टुंगो नरहेको उनले बताएका छन्।
उनले कोरोनाबाट निको हुने व्यक्तिमा इम्युनिटी बनिरहेको छ कि छैन भनेर पनि यकिन नभएको उनले बताएका छन्। यदि इम्यिुनिटी बनिरहेको भए पनि कति अवधिसमसम प्रभावी रहन्छ त्यो पनि भन्न नसकिने उनले बताएका छन्।
लन्डन किङ्स कलेजका वैज्ञानिकहरुले रिपोर्ट जारी गर्दै कोरोनाबाट निको भएका बिरामीमा बनेको इम्युनिटी छोटी अवधिका लागि हुनसक्ने बताएका थिए।
वैज्ञानिकहरुले ९६ संक्रमितमा अध्ययन गरेका थिए। उनीहरुले एन्टीबडिजमार्फत शरीरले स्वाभाविक रुपबाट कोरोनाको सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अध्ययन गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन कि कोरोना संक्रमित सन्चो भएपश्चात कति समयसम्म निको भइरहन्छ।
यो अध्ययनमा सहभागी सबैमा एन्टीबडिजले कोरोनालाई रोकेकाे पाइयाे तर तीन महिनाको अवधिमा यसको स्तर कम हुन थालेको थियो।
डब्लूएचओले पत्रकार सम्मेलनमा बताए अनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा कोरोनाबाट आंशिक रुपमा प्रभावित भएको पाइएको छ। तर १० वर्षभन्दाका संक्रमितको विषयमा ठोस कदम नचालेमा कोरोनाको महामारी खराबबाट झन खराब हुनसक्छ।